Manampy Mpikambana Bebe Kokoa Ao Amin’ny Vondrona Facebook Tz’utujil Tziij · Global Voices teny Malagasy
Manampy Mpikambana Bebe Kokoa Ao Amin'ny Vondrona Facebook Tz'utujil Tziij
Voadika ny 05 Novambra 2014 12:05 GMT
Hatramin'ny nanombohan'ny tetikasa Rising Voices, nihatsara ny tetikasa hamoaka amin'ny teny Mayana ao amin'ny vondrona Facebook Tz'utujil Tziij. Nandritra ny volana Jolay, nitombo ny fifarimbonana teo amin'ireo mpandray anjara, izay mizara ny hevitr'izy ireo amin'ny fiteny Maya.
Tany am-boalohany, mpiserasera avy ao an-tanànan'i San Juan La Laguna ireo mpikambana tokana niara-nisalahy tao amin'ny vondrona, saingy ambany ny taham-pandraisana anjara fa olona 150 monja no mpikambana. Na dia izany aza, nanomboka nanatevin-daharana ireo mpikambana hafa avy ao amin'ny tanàna mifanolo-bodirindrina tahaka an'i San Pedro La Laguna, San Pablo La Laguna, sy Santiago Atitlán, izay nanomboka nizara ny heviny sy ny fijeriny andavanandro. Mpikambana maherin'ny 400 izahay ankehitriny ao anatin'ny vondrona.
Ny zavatra mahaliana dia na dia eo aza ny fahasamihafan'ny tenim-paritra misy eo anivon'ny fiarahamonina, dia mifankahazo resaka sy mifandray izy ireo.
Nandritra ny volana Jolay, nanomboka nizara sarina bibikely ireo mpiserasera, ary tamin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona, dia nanomboka nanontany ny anaran'ireo bibikely amin'ny teny Maya izy ireo. Ao anatin'ny fanehoan-kevitra ireo mpandray anjara no miara-miasa hamantatra ny anaran'ireo bibikely. Amin'ity sary eto ambony ity, manontany ny mpisera iray :
Inona no anaran'ity kankana ity?
Maro ihany koa ireo mpiserasera manontany mikasika ny fomba fandikana ny teny Espaniola amin'ny teny maya. Noho ny fiarahamiasan'ny rehetra, miezaka manampy ny hafa izahay.
Mba ahafahan'ny tanora avy ao amin'ny fiarahamonina hiditra aterineto, nitsidika cyber isan-karazany izahay mba hifampiraharaha amin'ny tompony mba hitady fomba hoan'ny tanora hampiasan'izy ireo aterineto ahafahany mandray anjara mavitrika. Nahatonga ny vondrona hiara-hisalahy tsara kokoa izany ary nihamaro ireo olona nanatevin-daharana ny vondrona.
3 andro izayRising Voices